Tafaasiil dheeraad ah oo kasoo baxaysa geerida marxuum Xoosh Jibriil | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Tafaasiil dheeraad ah oo kasoo baxaysa geerida marxuum Xoosh Jibriil
Tafaasiil dheeraad ah oo kasoo baxaysa geerida marxuum Xoosh Jibriil
(Dubai) 08 Maarso 2019 – RW Soomaaliya Xasan Cali Kheyrre ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid Wasiirkii Dastuurka Somalia, Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, isagoo uga tacsiyeeyay ehelada, Qaraabada, asxaabta iyo guud ahaanba umadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay.
Wasiirkii Dastuurka ayaa la sheegay inuu ku geeriyoodey magaalada Dubai ee waddanka Imaaraadka Carabta, halkaasoo sida la sheegay uu tegey isagoo caafimaadkiisu taam yahay.
Cabdullaahi Goodax Barre oo ah wasiirka Waxbarashada Soomaaliya ayaa sheegay inuu marxuum Xoosh halkaas uu tegey ka qayb galka arooska gabadhiisa, balse uu mar qura uu xanuun kusoo dheelmaday xalay oo Khamiis ahayd.
“Innaa lillaah wa inaa ileyhi raajicuun, geeridu waa xaq, waa meel loo wada socdo, runti xanuun kusoo booday ayuu ahaa. Waxaan Dubai isugu nimid inaan u gabadhiisa arooskeeda sameyno, laakiin nasiib darro ayaa dhacday, oo wuu xanuunsaday,” ayuu yiri Goodax Barre.
”Markii isbitaalka la geeyayna wuu kasii daray, xalay wuxuu ku baryay qeybta bukaannada halista ah la dhigo ee isbitaalka, ugu dambeynna goor dhaweyd oo maanta ah ayey naftu ka baxday, Alle ha u naxariisto, qabrigiisana ha u waasiciyo”, ayuu daba dhigay Wasiir Cabdullaahi Goodax Barre oo BBC-da uga warramay 45 daqiiqo uun kaddib geerida wasiirkii hore.
Maydka marxuum Xoosh ayaa la sheegay in loo soo duulin doono magaalada Muqdisho, oo ay u badan tahay in aas qaran loogu sameeyo.
Previous article“SHEEKADU MA KOW IYO KUN HABEEN MID SOCOTAA?!!
Next articleDAAWO: Masjidka ugu ballaaran Turkiga oo xarigga laga jaray + Sawirro